Akụkọ - Mee ka ị mara “mgbanwe ọchịchịrị” na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa
Mee ka ị mara "mgbanwe mgbanwe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ" na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa
Ịzụ ahịa n'ịntanetị na n'ịntanetị ga -enwe nnukwu nkwakọ ngwaahịa. Agbanyeghị, ihe ndị na-abụghị gburugburu ebe obibi na nkwakọ ngwaahịa na-abụghị ọkọlọtọ ga-ebute mmetọ gburugburu ebe obibi n'ụwa. Taa, ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa na -aga '' mgbanwe mgbanwe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ '', na -eji ihe nkwakọ ngwaahịa gburugburu ebe obibi na -edochi ihe na -emerụ emerụ dị ka recyclable, oriri na biodegradable, iji kwalite mmepe gburugburu ebe obibi na -adịgide adịgide ma chebe gburugburu ebe obibi nke mmadụ. Taa, ka anyị mara "nkwakọ ngwaahịa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ" ọnụ.
▲ Gịnị bụ nkwakọ ngwaahịa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ?
Nkwakọ ngwaahịa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ kwekọrọ na mmepe na -adigide yana gụnyere akụkụ abụọ:
Otu na -akwalite mmegharị akụ;
Nke abụọ bụ mbibi kacha nta na gburugburu ebe obibi.
PackagingNkwughachi ugboro ugboro na mmeghari ohuru
Dịka ọmụmaatụ, enwere ike iji nkwakọ ngwaahịa biya, ihe ọ drinksụ, ụ, soy sauce, mmanya, wdg n'ime karama iko, enwere ike ịmegharị karama polyester n'ụzọ ụfọdụ mgbe emegharịchara ya. A na-eme ka usoro anụ ahụ dị ọcha nke ọma ma gwerie ya nke ọma, na usoro kemịkalụ bụ ịzọpịa ma sachaa PET megharịrị emegharị (ihe nkiri polyester) wee degharịa ya ka ọ bụrụ ihe nkwakọ ngwaahịa emegharịrị.
PackagingEzi nkwakọ ngwaahịa
Ngwa nkwakọ ngwaahịa nwere ọgaranya na akụrụngwa, oriri, adịghị emerụ ahụ ma ọ bụ ọbụna baara uru n'ahụ mmadụ, nweekwa ụfọdụ njirimara dịka ike. Ha etoola ngwa ngwa n'afọ ndị na -adịbeghị anya. Akụrụngwa ya gụnyere starch, protein, eriri osisi na ihe ndị ọzọ sitere n'okike.
Materials Ihe nkwakọ ngwaahịa ihe okike
Ihe ndị sitere n'okike dị ka akwụkwọ, osisi, ihe achara a kpara akpa, ibe osisi, akwa owu linen, wicker, ahịhịa na ihe ọkụkụ, ahịhịa osikapa, ahịhịa ọka wit, wdg, nwere ike mebie ngwa ngwa na gburugburu ebe obibi, emerụghị ebe obibi. gburugburu, na akụrụngwa enwere ike imeghari. Ụgwọ dị ala.
PackagingBodegradable nkwakọ ngwaahịa
Ọ bụghị naanị na ihe a nwere ọrụ na njiri mara plastik ọdịnala, kamakwa ọ nwere ike kewaa, wedata ma weghachi na gburugburu eke site na ime ala na mmiri mmiri, ma ọ bụ ihe nke ụzarị ultraviolet na anyanwụ, wee mezie ya ọzọ. ụdị na-adịghị egbu egbu. Banye gburugburu ebe obibi wee laghachi na okike.
Packaging Nkwakọ ngwaahịa nwere ike ime ka ọ bụrụ ọdịnihu
N'ime ihe nkwakọ ngwaahịa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, "nkwakọ ngwaahịa na -emebi emebi" na -aghọ ihe ga -eme n'ọdịnihu. Malite na Jenụwarị 2021, ebe 'usoro mmachi plastik' na-aga n'ihu, amachibidoro akpa ịzụ ahịa plastik na-adịghị emebi emebi, na ahịa plastik na akwụkwọ nkwakọ ngwaahịa abanyela oge mgbawa.
Site n'echiche nkwakọ ngwaahịa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nhọrọ kacha masị bụ: enweghị nkwakọ ngwaahịa ma ọ bụ obere nkwakọ ngwaahịa, nke na -ewepụ mmetụta nkwakọ ngwaahịa na gburugburu ebe obibi; sochiri nkwakọ ngwaahịa a na -eweghachite, nke a na -eji emegharị ma ọ bụ na -emegharị. Uru na mmetụta nrụgharị na -adabere na usoro nrụgharịgharị na echiche ndị ahịa. Mgbe mmadụ niile maara nchekwa gburugburu ebe obibi, ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ anyị ga -aka mma ma ka mma!